ဂျပ်စတင် ဒရူး ဘီဘာ (Justin Drew Bieber)  (၁၉၉၄ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ဖွား) သည် ကနေဒါနိုင်ငံသား ခေတ်ပေါ် pop နှင့် R&B တေးသံရှင်ဖြစ်သည်။ ဘီဘာ၏ ယူကျု(ဘ်) (YouTube) ပေါ်ရှိ ဗွီဒီယိုအား ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် စကူတာ ဘရောင်း (Scooter Braun)  က တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက်တွင် ဘီဘာ၏ မန်နေဂျာ ဖြစ်လာသည်။ ဘရောင်းက ဘီဘာအား နာမည်ကျော် တေးသံရှင် အပ်ရှာ (Usher) နှင့် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ပြီး မကြာမီတွင် အပ်ရှာနှင့် ဘရောင်းတို့ ပူးတွဲတီထောင်ထားသည့် Raymond Braun Media Group (RBMG) နှင့် လက်မှတ်ရေးထိုး လိုက်သည်။ ထိုနောက်တွင် Island Records နှင့် တေးအယ်လ်ဘမ် ထုတ်ရန်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Justin Bieber Biography & Awards။ Billboard။ Nielsen Business Media, Inc.။ 29 December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-06-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Farber၊ Jim။ "Justin Bieber, 'My World 2.0'"၊ New York Daily News၊ March 23, 2010။ 2010-06-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on6September 2012။
↑ Greenblatt၊ Leah။ "My World 2.0 (2010)"၊ Entertainment Weekly၊ Time၊ March 10, 2010။ June 11, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 20 September 2012။
↑ "Justin Bieber makes them proud. But why??last=Konjicanin"၊ Vancouver Observer၊ December 24, 2010။ January 11, 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on7January 2011။
↑ Mitchell၊ Gail (April 28, 2009)။ Usher Introduces Teen Singer Justin Bieber။ Billboard။ e5 Global Media။ 8 July 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 23, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Justin Bieber Fever Hits Miami"၊ CBS News၊ CBS Interactive၊ February 5, 2010။ March 27, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 May 2012။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျပ်စတင်_ဘီဘာ&oldid=728010" မှ ရယူရန်
ကနေဒါ အမျိုးသား အဆိုတော်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။